Home > Ny famoahana Nootropic tsara indrindra amin'ny Alpha GPC amin'ny 2021
Raha ny hevitray, ny nootropic fanampiny tsara indrindra Alpha GPC amin'ny 2021 ho an'ny fampiasana manokana no Cofttek Alpha GPC. Ny zavatra tsara indrindra momba ity famenon-tsakafo ity dia ny vokatra vegetarian / vegan ary noho izany, afaka mandray izany ny tsirairay. Ny tena zava-dehibe dia tsy misy varimbazaha, gluten, ronono, atody, trondro ary voanjo ny fanampiana. Izy io, noho izany, dia mety ihany koa ho an'ny fihinana ho an'ny olona voan'ny areti-mandringana. Na izany aza, raha manana fepetra efa nisy ianao dia tsy maintsy miresaka amin'ny dokoteranao aloha. izany fanampin tsy nahazo afa-tsy famerenana tsara ary manao izay tena lazainy fa ataony.
Inona no ilain'ny Alpha GPC?
Alpha GPC ny fitantanan-draharaha dia mampitombo ny famotsorana ny acététéloline neurotransmitter ary manamora ny fianarana sy ny fitadidiana. Ao amin'ny atleta, ny fanampiana Alpha GPC dia manakana ny fihenan'ny indostria amin'ny haavon'ny choline, mampitombo ny faharetana ary ny fitomboan'ny hormonina.
Haharitra hafiriana ny fiasan'ny Alpha GPC?
Mahomby ny Alpha GPC amin'ny fampitomboana ny famokarana herin'ny vatana ambany aorian'ny famitana 6 andro. Ireo mpanazatra fampisehoana fanatanjahantena dia afaka mieritreritra ny manampy Alpha GPC amin'ny sakafon'ireo atleta haingam-pandeha sy hery hanatsarana ny fahombiazan'ny hozatra.
Mahasasatra anao ve ny Alpha GPC?
Tena mahasasatra anao amin'ny alina izany, saingy misy dikany izany noho ny asa kalitao avo lenta izay nataonao antoandro. Ary mazava ho azy, mila matory ianao mba hamela ny sainao handamina tanteraka ireo fahatsiarovana nataonao tontolo andro.
Misy fiatraikany ve ny atidoha alfa?
Ny voka-dratsin'ny Alpha Brain dia tena tsy fahita firy. Miorina amin'ny fitsapana sy porofo ara-pitsaboana Alpha Brain, tsy misy tatitra momba ny voka-dratsy ateraky ny famenony.
Azonao atao ve ny miara-mandray choline Alpha GPC sy CDP?
Miara-miasa tsara ireo famenon-tsakafo choline roa ireo. … Alpha GPC dia vokatra avy amin'ny phosphatidylcholine (PC). Ary ny CDP Choline fanampiny dia manome ny uridine ilaina amin'ny synthesis PC. Raha atambatra dia omenao ny ati-dohanao ny karazana kolazy ilainy aorian'ny fatran'ny sela.
Voajanahary ve ny Alpha GPC?
Alpha GPC dia molekiola misy voajanahary izay mipetraka ao anatin'ny ati-doha. Ity otrikaina lehibe ity, mifamatotra akaiky amin'ny fianakavian-vitamina B, dia mitoetra ao anatin'ny neurons membrane cell.
Milamina ve ny atidoha Alfa?
Alpha Brain dia iray amin'ireo azo antoka indrindra suplementer nootropic. Na izany aza, mety hahatsapa fiatraikany kely ianao amin'ny resaka fifanakalozana fanafody na rehefa mihinana mihoatra ny takiana. Izany no antony tsy maintsy ifikiranao amin'ny doka atoro anao ary tsy maintsy manatona ny dokoteranao alohan'ny handraisanao ny fanampin-tsakafo nootropic
Mandra-pahoviana ny vokatry ny atidoha Alfa?
Ny atidoha Alpha dia maharitra mihoatra ny 6 ora. Raha ny filazan'ny sasany amin'ireo hevitra tsy miankina momba ny Alpha Brain dia mety maharitra 7-8 ora mahery ny vokany.
Tena miasa ve ny atidoha Alfa?
Ny fampiasana ny atidoha Alfa mandritra ny 6 herinandro dia nanatsara ny fahatsiarovana am-bava vao haingana sy ny fiasan'ny mpanatanteraka raha ampitahaina amin'ny fanaraha-maso, ao amin'ny vondrona olon-dehibe salama 18-35 taona. Ny valin'ity fitsapana ity dia mendrika ny fandalinana bebe kokoa amin'ny fampiharana ny fampivoarana ny kognita fanampin-tsakafo amin'ny fampisehoana atletisma.
Manana atidoha Alfa ve i Joe Rogan?
Joe Rogan dia mifandray amin'ny orinasa antsoina hoe Onnit, izay mamorona Alpha Brain, vokatra natao hanatsarana ny fitadidiana am-bava sy ny fahavitan'ny asa. Alpha Brain koa dia iray amin'ireo vokatra vitsivitsy eny an-tsena izay manana fitsapana ara-pitsaboana ary mino i Rogan fa manampy azy hitadidy ireo teny sy andian-teny tsara kokoa noho ny placebo.
Ara-dalàna ve ny ati-doha Alpha?
Raha naneho hevitra momba an'io toe-javatra io ny mpanorina ny Onnit Aubrey Marcus dia nilaza hoe: "Azontsika lazaina tsy am-pihambahambana fa tsy misy amphetamines na akora voarara hafa ao amin'ny atidoha Alpha. Izahay dia misafidy amin'ny alàlan'ny fifidianana ny isan'ny atidoha ao amin'ny Alpha amin'ny alàlanay manokana mba hahazoana antoka fa tsy misy zavatra voarara na tsy ara-dalàna ny vokatray.
Inona ny fanampin-tsakafo Nootropic tsara indrindra?
Ny Alpha GPC dia fitambarana koline voajanahary hita ao amin'ny ati-doha. Navoaka ihany koa io fitambarana io rehefa simba ny asidra matavy hita amin'ny soja sy ireo zavamaniry hafa. Na dia misy voajanahary aza ny Alpha GPC, amin'ny fifantohana voajanahary sy ny habetsany, dia tsy ampy ny fanatanterahana ireo fiasa izay noforonina hanohanana azy. Araka izany, Alpha GPC dia matetika voatendry ho an'ny fanjifana amin'ny endrika sakafo famenon-tsakafo izay misy Alpha GPC novokarina tamin'ny alàlan'ny deacylation simika na enzimika an'ny phosphatidylcholine-soja phospholipids.
Ny fikarohana natao tao amin'ny Alpha GPC nandritra ny taona maro dia nametraka azy ho toy ny precursor acetylcholine parasympathomimetic izay mandrisika ny rafi-pitabatabana parasympathetic ary noho izany dia manampy amin'ny fitsaboana ny Alzheimer sy ireo karazana dementia samihafa. Ny Alpha GPC koa no prodrug choline mahomby indrindra ary noho izany, ny famenon-tsakafo misy an'io fitambarana io dia loharanon-tsakafo choline amin'ny sakafo. Ny cholera dia otrikaina tena ilaina ilain'ny vatana hanaovana asa tena ilaina maro, toy ny fitomboan'ny sela sy ny metabolisma. Alpha GPC koa dia nootropic mahomby izay manatsara ny fiasan'ny ati-doha. Matetika izy io dia omena an'ireo marary efa antitra izay mihena ny fientanam-po. Ny fihinanana Alpha GPC dia afaka mampitombo ihany koa ny famokarana hormonina mitombo ao anatin'ny vatana, noho izany, ireo atleta manodidina ny asa dia mampiasa fanampin-tsakafo Alpha GPC hanatsarana ny faran'ny herin'izy ireo amin'ny ankapobeny.
Inona no famenon'ny atidoha tsara indrindra?
Ny fanampiana Alpha GPC dia mitondra tombony maro azo atao. Hanombohana azy, ny Alpha GPC dia fantatra fa manatsara ny fahasalamana sy ny fiasan'ny ati-doha. Manao izany amin'ny fampitomboana ny haavon'ny dopamine amin'ny vatana. Fikarohana marobe no nampifandray an'ity fitambarana ity tamin'ny fanatsarana ny fitadidy sy ny fahaizany mianatra. Amin'ny tranga manokana, alpha GPC fanampin-tsakafo koa dia afaka namerina ny fahatsiarovana na dia vitsy aza ny tranga toy izany. Ankoatry ny fanatsarana ny fiasan'ny ati-doha sy ny kognitika, dia misy porofo ampy hanaporofoana fa ny Alpha GPC dia azo ampiasaina hitsaboana ny Alzheimer, ireo karazana dementia samihafa, ary ireo fanafihana ischemika vetivety. Ny fitambarana dia ampiasain'ny atleta ihany koa satria mampiroborobo ny vokatra vokariny. Ho famaranana, ny alpha GPC dia manana tombony marobe, singa lehibe iray izay nanampy ny lazany tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Mampitombo ny HGH ve ny Alpha GPC?
Alpha GPC dia mpialoha lalana acetylcholine izay mety hampitombo ny fitomboan'ny hormonina amin'ny alàlan'ny asan'ny catecholamine entan'ny acetylcholine.
Miteraka fahakiviana ve ny kôlôjia?
Tsy nahita fikambanana lehibe izahay tamin'ny famakafakana mifandraika amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny choline plasma sy ny soritr'aretin'ny fahaketrahana. Amin'ity fandalinana be mponina ity, ny fifantohana choline dia mifandray ratsy amin'ny soritr'aretin'ny tebiteby fa tsy amin'ny soritr'aretin'ny fahaketrahana.
Inona no ao amin'ny atidoha Alfa?
Alpha Brain dia manana akora roa manatsara ny haavon'ny acetylcholine: ny choline GPC, izay avadika ho acetylcholine ny vatana, ary ny Huperzine A, alkaloid iray nalaina avy tamin'ny lumisy club club sinoa, fantatra koa amin'ny anarana hoe Huperzia serrata.
Azo antoka ve ny kôlômanina CDP?
Ny choline CDP dia zava-mahadomelina azo antoka, araka ny naseho ny fitsapana poizina; tsy misy fiatraikany lehibe amin'ny rafitra cholinergic ary zaka tsara izy io.
Inona avy ireo vokatry ny Noopept?
Ny voka-dratsin'ny mety hoopept dia misy fikorontanana amin'ny torimaso (marary 5/31), fahasosorana (3/31), ary fiakaran'ny tosidra (7/31) (Neznamov sy Teleshova, 2009). Mekanisma fihetsika avy amin'ny fikarohana preclinical Fikarohana iray momba ny biby mpikiky no nitatitra fa noopept no niampita ny sakana ati-rà.
Mampitombo ny dopamine ve ny Alpha GPC?
Mety ho azo atao ny manatsara ny famolavolana fahatsiarovana sy manatsara ny fahaiza-mianatra ny Alpha GPC. Alpha GPC dia afaka mampiakatra ny haavon'ny dopamine ihany koa, izay tena mahasoa ny fiasan'ny ati-doha.
Manao ahoana ny hafainganam-pandehan'ny Alpha GPC?
Ny Alpha GPC dia mandaitra amin'ny fampitomboana ny famokarana herin'ny vatana ambany aorian'ny famenoana 6 andro. Ireo mpanazatra fampisehoana fanatanjahantena dia afaka mieritreritra ny manampy Alpha GPC amin'ny sakafon'ireo atleta haingam-pandeha sy hery hanatsarana ny fahombiazan'ny hozatra.
Inona avy ireo soritr'aretin'ny tsy fahampian'ny choline?
Mahatsiaro ho be fanahiana na tsy milamina.
Aty matavy, fantatra amin'ny anarana hoe aretin'aty tsy alikaola (NAFLD)
Némrosis voa hemorrhagic.
Mety amin'ny fanahiana ve ny kôlôjia?
Ny cholera dia mety hanatsara ny fiasan'ny fahatsiarovana, hanatsara ny fivelaran'ny ati-doha ary hitsaboana ny fitaintainanana sy ny aretin-tsaina hafa
Inona no loharanon'ny choline tsara indrindra?
Ny loharanon'ny sakafo choline manan-karena indrindra dia ny hena, trondro, ronono ary atody. Voankazo, legioma ary voamaina marobe no misy choline koa, koa betsaka ny safidy ho an'ny olona mihinana sakafo tsy mihinan-kena na zavamaniry.
Ahoana no ahafahako mahazo choline voajanahary?
Ny multivitamin dia matetika tsy misy choline.
Na dia mihinana be tavy matavy aza ny sakafo be kôlôly - aty, atody atody ary hena mena, dia azo atao koa ny mahita choline amin'ny sakafo ambany tavy matavy ao anatin'izany ny salmon, cod, tilapia, tratran'ny akoho ary legioma.
Ahoana no hitsapana ny tsy fahampian'ny choline?
Amin'izao fotoana izao, tsy misy fitsapana klinika azo antoka azo ampiasaina hamantarana ireo olona tsy ampy choline. Ny tsiranoka choline, betaine, ary phosphatidylcholine plasma dia nihena tamin'ny olombelona nanome sakafo tsy fahampian'ny choline, saingy nilatsaka 30% -50% izy ireo.
Inona no tsiro amin'ny Alpha GPC?
Izy io dia manana tsiro mamy kely izay azo tsikaritra am-pitaka. Azo antoka fa tsy soloina siramamy ho an'ny rehetra izany.
Mahomby ve ny fanampin-tsinay?
Ny fandinihana fandinihana lehibe dia mampifandray ny fihinanana choline sy ny haavon'ny rà hanatsarana ny fiasan'ny ati-doha, ao anatin'izany ny fahatsiarovana sy ny fikarakarana tsara kokoa. Fanampiana amin'ny 1,000 mg isan'andro dia nihatsara ny fahatsiarovana am-bava fohy sy maharitra an'ireo olon-dehibe 50-85 taona izay tsy dia nahatadidy.
Mitovy amin'ny choline ve ny citicoline?
Citicoline no anaran'ny mpiorina izay mitovy amin'ny simika amin'ny cytidine-diphosphocoline (CDP choline). Ny hany maha samy hafa azy dia ny fisian'ny CDP choline dia voajanahary amin'ny olombelona, ​​ary ny citicoline no endrika hita ao amin'ny famenon-tsakafo.
Mampitombo ny dopamine ve ny citicoline?
Ny Citicoline dia manatsara ny fifandraisana amin'ny sela amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fahafahan'ny neurotransmitters, ao anatin'izany ny acetylcholine, norepinephrine, ary dopamine. Raha tsorina, ny singa choline an'ny citicoline dia ampiasaina hamoronana acetylcholine, izay neurotransmitter mpanatanteraka voalohany ao amin'ny ati-dohan'olombelona.
Inona no maha samy hafa ny choline sy phosphatidylcholine?
Phosphatidylcholine dia simika misy atody, soja, voantsinapy, tanamasoandro ary sakafo hafa. Ny teny hoe "phosphatidylcholine" indraindray dia ampiasaina mifanolo amin'ny "lecithin", na dia samy hafa aza izy roa. Ny cholera dia singa ao amin'ny phosphatidylcholine, izay singa ao amin'ny lecithin.
Miteraka fitaintainanana ve ny kôlôjia?
Amin'ity fandalinana be mponina ity, ny fifantohana choline dia mifandray ratsy amin'ny soritr'aretin'ny tebiteby fa tsy amin'ny soritr'aretin'ny fahaketrahana.
Mampitombo ny serotonine ve ny kôline?
Fiovana amin'ny haavon'ny plasma ny choline na ny asidra amine sasany dia miteraka fiovan'ny haavon'ny ati-dohan'ireto neurotransmitter ireto - ny choline ho an'ny acetylcholine, ny tryptophan ho an'ny serotonin ary ny tyrosine ho an'ny catecholamines.
Inona avy ireo voka-dratsin'ny choline?
salivation be loatra.
Manome hery anao ve ny choline?
Voalaza fa ny kôlôly dia mitana andraikitra lehibe amin'ny metabolisma ny tavy; manapotika ny tavy hampiasaina ho loharano angovo. Ity fihetsika choline ity dia mahatonga azy io ho sarobidy amin'ny fisorohana ny toe-javatra toy ny atavy matavy na tavy be loatra ao anaty ra.
Tsara amin'ny fanahiana ve i Lecithin?
Inona avy ireo voka-dratsin'ny Alpha GPC?
Izy io dia mety hiteraka voka-dratsin'ny olona sasany, anisan'izany ny aretin'andoha, aretin'andoha, fanina ary ny hoditra. Rehefa omena ho toy ny tifitra: SAFE POSSIBLY azo antoka ny Alpha GPC rehefa ampiasaina amin'ny mety. Izy io dia mety hiteraka voka-dratsin'ny olona sasany, anisan'izany ny aretin'andoha, aretin'andoha, tsy fahitan-tory, fisafotofotoana ary mena eo amin'ny toerana fanindronana.
Maharitra hafiriana ny Alpha GPC vao miasa?
Malalaka ve ny rano Alpha GPC sa matavy?
Ny endrika mahazatra indrindra amin'ny sakafo dia ny phosphatidylcholine (PC), phosphocholine, alpha-gpc, sphingomyelin, CDP-choline, ary choline maimaim-poana. Ny phospholine, ny choline maimaimpoana ary ny alpha-gpc dia tsy voavahan-drano, fa ny phosphatidylcholine sy ny sphingomyelin kosa dia mety levona.
Azo ampiasaina ve ny atidoha Alfa?
Alpha Brain dia iray amin'ireo fanampiana azo antoka nootropic. Na izany aza, mety hahatsapa fiatraikany kely ianao amin'ny resaka fifanakalozana fanafody na rehefa mihinana mihoatra ny takiana. Izany no antony tsy maintsy ifikiranao amin'ireo fatra atoro anao ary tsy maintsy manatona ny dokoteranao alohan'ny handraisanao ny fanampin-tsakafo nootropic.
Miasa ve ny famenon'ny ati-doha?
Ny fandinihana rehetra natao mba hamakafakana ireo fiantraikany samihafa amin'ny Alpha GPC amin'ny fiasan'ny vatana maro dia mifanaraka tsara fa ny fitambaran-javatra, rehefa levona ao anatin'ny fetrany isan'andro, dia azo antoka tanteraka. Na izany aza, ny fampidirana tafahoatra ny Alpha GPC dia mety hiteraka voka-boaza, toy ny aretin'andoha, aretim-po, tsy fahampiana Ny tena zava-dehibe dia ny vehivavy bevohoka sy mampinono dia tsy tokony mihinana io sompira io satria tsy mbola nisy fandalinana natao hatrizay handalinana ny vokatry ny Alpha GPC amin'ireo vehivavy bevohoka. Toy izany koa, raha manana fepetra efa misy mialoha ianao dia tsara kokoa ny manatona mpitsabo anao alohan'ny hanombohana ny fanampin-tsakafo Alpha GPC.
Mety hiteraka aretin'andoha ve ny Nootropics?
Saingy misy ny voka-dratsy mety hitranga, anisan'izany ny aretin'andoha, ny tebiteby ary ny tsy fahitan-tory.
Mety hanimba ve ny kôlôly be loatra?
Azonao atao ve ny mandray Alpha GPC isan'andro?
Rehefa raisina amin'ny dosie voatondro Alpha GPC dia mahazaka tsara. Ho an'ny ankamaroan'ny olon-dehibe, ny isan'ireo fatra azo ekena dia somary malalaka; fatra isan'andro mitombo 300-1200 mg, rehefa raisina amin'ny doka iray na roa, dia azo antoka sy mahomby.
Milamina ve ny Nootropics?
Ny fampiasana diso ny nootropics - izay singa mety hanova, hanatsara, na hampitombo ny fahaizan'ny kognita, indrindra amin'ny alàlan'ny fanentanana na fanakanana ny neurotransmitter sasany - dia mety hampidi-doza sy hanimba ny ati-dohan'olombelona, ​​ary ny olona sasany izay manana tantaran'ny fampiasana saina na fampiasana zava-mahadomelina. aretina mety hitranga.
Inona no pilina atidoha tsara indrindra eny an-tsena?
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay dia nanomboka nandinika bebe kokoa ny vatany ny olona. Ny resadresaka momba ny fahasalaman'ny ati-doha dia nihanahery vaika satria ny ati-doha no foibe fanaraha-maso ny vatana iray manontolo ary izay tsy fahombiazan'ny ati-doha dia mety hitera-doza. Manana andraikitra lehibe amin'ny fitandroana ny fahasalaman'ny ati-doha sy fanatsarana ny fiasan'ny ati-doha i Choline. Noho izany, maro amin'ireo famenon-tsakafo no misy tsindrona manome choline ny vatana ankehitriny. Ny iray amin'ireo fitambarana ireo dia ny Alpha GPC.
Nootropic ve ny kafe?
Ny kafe dia heverina ho nootropic satria misy kafeinina. Ny kafe dia malaza nootropic izay manatsara indrindra ny fahamailoana sy ny toe-po. Ny Nootropics, antsoina koa hoe "fanafody mahira-tsaina" dia manampy amin'ny fanatsarana ny fiasan'ny kognita, manatsara ny fahatsiarovana sy ny fahombiazan'ny ati-doha.
Iza amin'ireo Nootropics no tena miasa?
Fianarana natao hahatakarana ny vokatry ny alpha GPC amin'ny famoahana herinaratra dia nanambara fa ny fatra 600 mg dia miteraka fitomboan'ny tsiambaratelon'ny hormonina mitombo. Noho izany, ny fatra mahazatra alpha GPC dia matetika eo anelanelan'ny 300 ka hatramin'ny 600 mg ary atoro ny atleta hifikitra amin'ny fetra farany ambony.
Na izany aza, rehefa miresaka ny fihenan'ny kognitive, saika ny fandalinana rehetra izay nanadihady ny vokatry ny Alpha GPC amin'ny fiasan-tsaina dia nampiasa fatra mahazatra 1200 mg isan'andro, mizara telo fatra 400 mg. Ny fihenan'ity tahan'ny fatra ity dia mety tsy hisy vokany mitovy amin'ny fatra 1200 mg isan'andro. Noho izany, ireo marary mijaly amin'ny Alzheimer, ny dementia ary ny TIA dia matetika no amporisihina hifikitra amin'ny doka 1200mg / andro.
CBD ve nootropic?
Noho ny tombony maro azo avy amin'ny fahasalamana ara-pahalalana, CBD dia heverina ho nootropic. Mpikaroka marobe no mazoto amin'ny fahafahan'ny CBD manampy amin'ny olana ara-tsaina mahazatra toy ny fiahiahy, ny fahaketrahana ary ny adin-tsaina.
Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny Alpha GPC?
① Mandaitra amin'ny fitsaboana ny aretin'ny alzheimer
Nandritra ny taona maro dia maro ny fanadihadiana natao mba handinihana ny fahafahan'io fitambarana io hanampy amin'ny fitsaboana Alzheimer. Ny fanadihadiana iray toy izany dia nanambara fa ny Alpha GPC dia manatsara ny haavon'ny acetylcholine ao amin'ny ati-doha. Ny acetylcholine dia mifamatotra amin'ny asan'ny ati-doha nohatsaraina sy ny fahalalana mihatsara. Ny tena zava-dehibe dia nanambara ihany koa ny fanadihadiana fa amin'ny olona voan'ny tosidra, ny Alpha GPC dia nampihena ny fivontosana manodidina ny lalan-drà ao amin'ny ati-doha, ka nihatsara ny fiasan'ny ati-doha.
Ny fikarohana dia naneho ihany koa fa ireo marary mijaly amin'ny aretin'i Alzheimer dia afaka mahazo tombony amin'ny fihinanana 1200 mg alpha GPC isan'andro. Ity fatra ity dia atolotra mandritra ny 3 ka hatramin'ny 6 volana ary manatsara ny fahaiza-misaina amin'ireo olona voan'io aretina mahafaty io.
② Manampy amin'ny fitsaboana Dementia izy io
Betsaka ny olona misafotofoto eo anelanelan'ny dementia sy Alzheimers. Noho izany, ilaina ny mametraka ny fahasamihafana eo amin'izy roa. Ny Dementia dia teny ankapobeny ampiasaina hamaritana ny fihenan'ny fahafahan'ny sain'ny olona an-tsaina izay manomboka manelingelina ny asany isan'andro ilay olona. Ny Alzheimer dia tsy dementia fa aretina manokana izay iray amin'ireo antony mahazatra mahatonga ny dementia.
Nandritra ny taona maro izay dia nisy fandinihana maromaro natao mba hianarana ny vokatry ny fandraisana alpha GPC amin'ireo marary Dementia. Ny fandinihana iray dia nanambara fa ny fampidirana alpha GPC tsy tapaka nandritra ny enim-bolana dia nanatsara ny fahiratan-tsaina sy fiasa any amin'ireo marary manana demement malefaka ho an'ny antonony. Toy izany koa, fandinihana iray hafa nampifandray ny fanjifana alpha GPC tsy tapaka ary ny fanatsarana ny fahalalana ny marary izay voan'ny dementia sy ny serebrovascular aretina. Ho fehiny, ny olona voan'ny dementia dia afaka mahazo tombony betsaka amin'ny alàlan'ny fatrany 1000 mg an'ny alfa GPC isan'andro. Amin'ireo marary ireo, ny fampidiran-dàlana Alpha GPC dia mifandray amin'ny fihetsika sy fanatsarana ary fahatsiarovan-tena tsara kokoa.
③ Ampiasaina hitsaboana ny fanafody Isika tsy fantatra ity
Ny fanafihana isemika tsy misy farany (TIA) dia andiany fohy amin'ny fivoaran'ny neurolojia, matetika vokatry ny fahatapahana ny famatsiana ny ra amin'ny ati-doha sy maso. Ny fanafihana iskemia tsy misy farany matetika dia maharitra mandritra ny minitra vitsivitsy fotsiny, fa hita ho toy ny fiatoana izy ireo. Nisy ny fandinihana natao handinihana ny vokatry ny Alpha GPC amin'ny fivontosan'ny stroke sy ny marary TIA. Nasehon'ilay fanadihadiana fa ny olona izay nitifitra Alpha GPC 1200-mg isan'andro nandritra ny 28 andro, narahin'ny 1200 mg / andro an'ny Alpha GPC (tamin'ny alàlan'ny fepetra am-bava) nandritra ny enim-bolana, dia naneho fahaiza-misaina tsara kokoa ary koa fanarenana tsara amin'ny TIA. .
④ Manamboatra fametrahana Nootropic mahomby izany
Acetylcholine dia simika organika izay miasa toy ny neurotransmitter ary tena ilaina amin'ny fahatsiarovana sy ny fampandehanana fianarana. Mampitombo io zavatra simika ao anaty atidoha io ny Alpha GPC, ka mahatonga azy ireo hitadidy sy fahatsiarovan-tena. Noho izany, ny alpha GPC dia matetika ampiasaina ho singa manan-danja amin'ny sakafo famatsiana nootropic.
⑤ Manatsara ny fampisehoana Athletic izany
Amin'ny atleta, ny fampidirana alpha GPC dia mifandray amin'ny fampihenana ny choline fanatanjahan-tena. Ny tena zava-dehibe kokoa dia mifamatotra ihany koa amin'ny famokarana hormonina fitomboana sy ny fampitomboana ny faharetana amin'ny asa farany. Noho izany, ny mpanazatra sy ny mpampiofana matetika dia manome torohevitra ireo atleta hanina alpha GPC mba hahatrarana fampitomboana ny hozatra.
(1). National Library of Medicine National Institute of Health, Gatti G, Barzaghi N, Acuto G, Abbiati G, Fossati T, Perucca E., 1992 Sep; 30 (9): 331-5.
(2). Doggrell SA & Evans S; Evans (Oktobra 2003). "Fitsaboana dementia amin'ny modération neurotransmission". Hevitra manam-pahaizana momba ny zava-mahadomelina. 12 (10): 1633–1654.
(3). Parnetti, Lucilla; et al. (2007). "Cholinergic precursor amin'ny fitsaboana fahasembanana ara-pahalalana: fomba fiasa tsy mahomby sa mila fanombanana indray?". Gazetin'ny siansa momba ny neurolojia. 257 (1-2): 264–9.
(4). Fitsangatsanganana ohatra.
(5). Oleoylethanolamide (oea) - ilay wand mahagaga amin'ny fiainanao.
(6). Anandamide vs cbd: iza no tsara kokoa amin'ny fahasalamanao? Izay rehetra tokony ho fantatrao momba azy ireo!
(7). Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny nikôtinamid riboside chloride.
(8). Fanampiny magnesium l-threonate: tombontsoa, ​​fatra, ary vokany hafa.
(9). Palmitoylethanolamide (pea): tombony, fatra, fampiasana, famenony.
(10). Tombontsoa lehibe 6 ho an'ny fahasalamana amin'ny famenon-tsakafo resveratrol.
(11). Tombony 5 be indrindra amin'ny fihinanana phosphatidylserine (ps).
(12). Tombony 5 ambony amin'ny fihinanana quinone pyrroloquinoline (pqq).
(13). Ny famenon-tsakafo tsara indrindra ho an'ny monotucleotide nicotinamide (nmn).
Alpha-gpc azo antoka fa iray amin'ireo nootropics tsara indrindra ho ahy. Mampiasa 150mg aho mandritra ny andro maro izay tiako hampitomboana ny ati-doha.
Ny tena nahagaga ahy ahy dia ny fahafahany manatsara ny fahombiazan'ny atletisma sy ny fanarenana azy tsara. Amin'ny maha mpilalao basikety anao dia PED ara-bakiteny tokoa. Mahatsapa fifehezana bebe kokoa ny vatanao ianao sy ny fihetsika, ny fitomboan'ny hozatra tsara sy ny fandrindrana dia mitombo be.
Tsy mandray afa-tsy 300mg aho izao. Naka izany nandritra ny 2 volana mahitsy. Tsy misy fahaketrahana. Angovo fotsiny ho an'ny gym.
Mandray 300mg isa-maraina isan'andro aho. Ho somary kivy aho rehefa afaka herinandro vitsivitsy tao anatin'ny taona vitsivitsy, ka hiala sasatra mandritra ny andro vitsivitsy. Ankehitriny rehefa miala sasatra kely aho ary miverina aminy, dia vao mainka sarotra amiko izany ary mahazo nofy tena mety mandritra ny iray na roa alina aho. Torimaso tsy dia lalina loatra. Tsy tiako io. Namaha olana momba ny zavona ara-tsaina mandritra ny androm-piainany ho ahy izy io. Mifantoka kokoa sy mailo ara-piaraha-monina aho izao, ary manana hery ara-batana bebe kokoa. Fantatro ny olon-drehetra izay nilaza fa ketraka amin'izany izy ireo - ary ekeko fa ny famoizam-po amin'ny choline be loatra dia zavatra ratsy indrindra eto an-tany ary tena hanimba ny andronao izao. Ka raha misy mamaky an'io ary mieritreritra ny hanandrana azy dia atombohy amin'ny fatra farany ambany indrindra, angamba na dia ny andro hafa na mihoatra aza, ary araho maso izay tsapanao.
Ho ahy dia mandeha tsara izy io. Raha ny marina dia tsy nanantena be loatra aho fa isaky ny mandray izany aho dia mahatsapa ho mifantoka kokoa ary manana fitadidy mitombo.
Mandalina zavatra betsaka aho ka tena tsikaritra ny vokany. Mihinana 150-300 mg aho.